ပုံနှိပ်မီဒီယာဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ .. (လူထုဦးစိန်ဝင်းနှင့် Eleven Media အင်တာဗျူး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Interviews & Profiles » ပုံနှိပ်မီဒီယာဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ .. (လူထုဦးစိန်ဝင်းနှင့် Eleven Media အင်တာဗျူး)
ပုံနှိပ်မီဒီယာဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ .. (လူထုဦးစိန်ဝင်းနှင့် Eleven Media အင်တာဗျူး)
Posted by kai on Mar 22, 2012 in Interviews & Profiles, Opinions & Discussion | 22 comments
“မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်တယ်၊ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ကြံ့ခိုင်စေချင်တယ်ဆိုရင်၊ မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်၊ လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ဖန်တီးပေးဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ မီဒီယာတွေကို ထပ်ပြီးတော့ ချုပ်ကိုင်ဖို့ မလုပ်သင့်ဘူး” ၀ါရင့် သတင်းစာဆရာ လူထုဦးစိန်ဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Wednesday, 21 March 2012 22:44
မေး – မတ်လ ၁၉၊ ၂၀ မှာ Conference on Media Development in Myanmar အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မှာ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်တဲ့အခါမှာ ပြည်တွင်းက လူတစ်ချို့ကို ခေါ်တယ်။ ပြည်ပက လူတစ်ချို့ကို ခေါ်တယ်။ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ UNESCO တို့ ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာ ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့(IMS) လည်း ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တပ်ထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကတော့ Media Development in Myanmar လို့ ဆိုပါတယ်။ သတင်းတော်တော်များများမှာ ဖော်ပြခဲ့တာကတော့ ဆွေးနွေးပွဲက ရလာတဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို ပုံနှိပ်မီဒီယာ ဥပဒေအတွက် ဒုတိယမူကြမ်း ရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာ ထည့်သွင်းမယ်လို့ ဖော်ပြထားကြပါတယ်။ အခု ပုံနှိပ်မီဒီယာ ဥပဒေအတွက် ဒုတိယမူကြမ်း ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ ပိုပြီးပြည့်စုံအောင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပကလူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး အခုလိုမျိုး Conference လုပ်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက မဇ္ဈိမသတင်းဌာန အင်တာဗျူးမှာ ဖြေထားတာ ဖတ်ရပါတယ်။ ဆရာ့ အမြင်ကရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
ဖြေ – ဆရာလည်း ဒီဟာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ Conference ခေါင်းစဉ်က ဘာလဲဆိုတော့ Media Development in Myanmar ၊ မြန်မာ မီဒီယာလောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ လုပ်တာဖြစ်တယ်။ လာပြီး တော့ ဖတ်ကြားတဲ့ ပြည်ပက ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း မီဒီယာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက်ပဲ ပြောသွားကြပါတယ်။ Media Law ဆိုတာက အစိုးရဘက်က ဖတ်တဲ့ စာတမ်းတွေမှာပဲ သွားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီ Conference ဟာ ရောင်တော်ပြန်နဲ့ ရောတဲ့ Conference လို့ပဲ ဆရာက သတ်မှတ်တယ်။ မီဒီယာ ဥပဒေတွေ၊ ဥပဒေအမျိုးမျိုးနဲ့ သူတို့က ထိန်းချုပ်ဖို့ လုပ်ကိုင်ကြတယ်။ ဥပဒေဆိုတဲ့ သဘောကိုက ထိန်းချုပ်ဖို့ပဲ။ ပြည်သူတွေရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ၊ ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် တည်ဆဲအစိုးရ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ရှိဖို့၊ သူတို့ အာဏာတည်မြဲဖို့အတွက် နောက် ပြည် သူလူထုကို ချုပ်ကိုင်ထားဖို့ ဖိနှိပ်ထားဖို့
အခုရှိနေတဲ့ မီဒီယာဥပဒေ အပါအ၀င် အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေတို့ ဘာတို့ အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်စေတဲ့တို့ စတဲ့ ဥပဒေတွေအားလုံးကတော့ ပြည်သူတွေကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ ဥပဒေတွေဖြစ်တယ် …
ဖြေ – လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောကြားခွင့် ဆိုကတည်းက စကားလုံးက ရှင်းနေပြီလေ။ ဒါ လွတ်လပ်ခွင့် ပဲ။ အဲဒီ လွတ်လပ်စွာ ပြောကြားခွင့်ကို ထိန်းချုပ်တယ် ဆိုကတည်းကိုက ဒီထိန်းချုပ်တဲ့ ဥပဒေဟာ မှားနေပြီ။ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာ ကျတယ်။ မလေးစားရာ ကျတယ်။ လက်တစ်လုံးခြား လုပ်ပြီးတော့ ကိုယ်လိုချင်ရာ ဆွဲတဲ့သဘော ရောက်တယ်။ ဆရာ့အနေနဲ့ကတော့ ဒါကို လုံးဝလက်မခံဘူး။ ဒါဟာ လုံးဝဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ကျူးကျော် စော်ကားမှုလို့ပဲ သတ်မှတ်တယ်။ မီဒီယာသမား တစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ မီဒီယာကို ချုပ်ကိုင်ဖို့လုပ်တဲ့ စည်းကမ်းဥပဒေ မှန်သမျှကို ဆန့်ကျင်ရမှာပဲ။ ဒီလို ဆန့်ကျင်တာ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် စတုထ္ထမဏ္ဍိုင် ပီသစေချင်လို့။ စတု ထ္ထမဏ္ဍိုင် ပီပီသသ ထွန်းကားမှ အဲဒီတိုင်းပြည်ဟာလည်းပဲ အေးအေးချမ်းချမ်း သာသာယာယာနဲ့ ထွန်းကား တိုးတက်လာနိုင်တယ်။
ဖြေ – ခုနက ပြောသလိုပဲ။ ဒါဟာ ထိန်းချုပ်မှုပဲ။ ထိန်းချုပ်မှု မှန်သမျှကို ဆန့်ကျင်တယ်။ ဘယ် သတင်းမီဒီယာသမား စစ်စစ်၊ ဘယ် Professional မဆို ကိုယ့်လည်ပင်းကို စွပ်မယ့် ကြိုးကွင်းကို ဘယ်သူမှ ၀င်ပြီးတော့ ကျစ်မပေးဘူး။ အဲလိုဆိုရင် အဲဒီလူဟာ Professional သတင်းသမား စစ်စစ် မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါကို ၀င်ပြီးတော့ ကြိုးကျစ်တဲ့အထဲမှာ ၀င်ပါတဲ့သူတွေဟာ ခေတ်ပျက်ဂျာနယ်လစ်တွေ၊ သူတို့ အခွင့်အရေးကို မျှော်ကိုးပြီးတော့၊ သူတို့ အကျိုးစီးပွားတစ်ခု အတွက် ဒီထဲမှာ ရောယိမ်းလိုက် ဘသားယိမ်းလိုက် ၀င်ယိမ်းကြတာဟာ ခေတ်ပျက် ဂျာနယ်လစ်တွေပဲ ဖြစ်တယ်။ Professional ဂျာနယ်လစ်တွေ မဟုတ်ဘူး။
မေး – ဒါပေမယ့် အဲဒီ Conference မှာ ပြည်ပအခြေစိုက် မီဒီယာ (exile media) တွေလည်း ပါဝင် ဆွးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ ပြန်ရေးကြတဲ့ သတင်းတွေအရ Conference အပေါ် အကောင်းမြင် ရှုထောင့်က ရေးခဲ့တာ ဖတ်ရပါတယ်။ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တုန်းက DVB၊ ဧရာဝတီအပါအ၀င် ပြည်ပအခြေစိုက် မီဒီယာ ၁၁ ခုက အစိုးရ ရေးဆွဲနေတဲ့ မီဒီယာ ဥပဒေနဲ့ သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် တင်းကြပ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ ကြေညာချက်တစ်ခု ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာလည်း သူတို့ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေကို မပြတ်ဖတ်နေတဲ့သူဆိုတော့ ဒီအပေါ်မှာ ဘယ်လို သုံးသပ်ချင်ပါသလဲ။
ဖြေ – တချို့တွေက ဆရာနဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ပြောတဲ့ စကားက တစ်မျိုးပဲ။ သူတို့ ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ ပြန်ရေးတဲ့ အခါကျတော့ တစ်မျိုးပဲ။ သူတို့ ဆရာနဲ့ တွေ့တဲ့ အချိန်ကျတော့ ဆရာတို့နဲ့ တစ်သဘောတည်း ကိုက်ညီနေတာပဲ။ ပြန်ရေးတဲ့အခါကျမှ အစိုးရက ပွင့်လင်းလာပါပြီ။ ဒီမိုကရေစီ လမ်းစကိုတော့ ခြေလှမ်းနင်းနေပါပြီ။ လျှောက်လှမ်းနေတာ ကျွန်တော်တို့ တွေ့နေရပါပြီ။ ဒါတွေ ပြောတာပဲ။ ဆရာတို့နဲ့ တွေ့တဲ့အခါကျတော့ ဒါတွေ သူတို့ လုံးဝမယုံဘူးတဲ့။ အပြောင်းအလဲတွေ လုံးဝမယုံ ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီ လမ်းစ မြင်တယ်ဆိုတာလည်း လုံးဝသူတို့ မမြင်ပါဘူးလို့ သူတို့ ပြောတာပဲ။ ဒါဟာ သူတို့ ဒီမှာလာပြီးတော့ လုပ်ခွင့်သာဖို့အတွက် အခွင့်အရေး မျှော်ကိုးပြီးတော့ လာပြီးတော့ ရောယောင်နေကြတာပဲ။ ဂျာနယ်လစ် စစ်စစ်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။
ဖြေ – ဒီလူတွေက ဒီမှာ အစိုးရ၊ အခု ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ပေါင်း၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာနရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ သတင်းဌာနတွေ ထူထောင်မယ်၊ သတင်းစာတွေ ထုတ်ခွင့်တောင်းမယ်ဆိုခဲ့ရင် ဒါဟာ သူတို့ကလည်း အခွင့်အရေး မျှော်ကိုးပြီးလုပ်တဲ့ သတင်းသမားလို့ပဲ သတ်မှတ်ရမှာပေါ့။ ပြည်တွင်းမှာတောင်မှ ဘယ်သူမှ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သတင်းစာတွေ ထုတ်ခွင့်မပေး၊ ဂျာနယ်တွေ ထုတ်ခွင့်မပေးတာကို သူတို့က ဒီအခွင့်အရေးကို ရအောင်ယူ ချင်တယ်ဆိုတာကိုက ဒါဟာ မမှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ။ သိက္ခာရှိ သတင်းသမားဆိုရင် ဒါမျိုးဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး။ ကောင်းတဲ့ ဂျာနယ်လစ်တွေရှိ ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သတင်းသမား ပီသအောင် ကြိုးစားနေတဲ့ လူငယ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ မရှိဘူးလို့ မဟုတ်ဘူး။
မေး – DVB မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ပြည်ပမီဒီယာတွေ လာခွင့်ပေးပြီး အခုလုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ပါတနာအနေနဲ့ ပါလာတာဟာ တိုးတက်မှုတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ ဒီပါတနာဆိုတဲ့ ကိစ္စရပ်ကို ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲထွဋ်က သူပြောတဲ့အထဲမှာ ထည့်ပြောသွားတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကရော တိုးတက်မှုလို့ ယူဆပါသလား။
ဖြေ – တိုးတက်မှုလို့ မယူဆပါဘူး။ တစ်ဖက်က ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ဆောက်နေပြီလို့ ပြောလာခဲ့တာ တစ်နှစ်ရှိပြီ။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ဆောက်နေတယ်ဆိုရင် လူတွေ လွတ်လပ်စွာ ၀င်ထွက်သွားလာ လုပ်ကိုင်နေခြင်းဟာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာတိုးတက်မှုမှ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး – နှစ်ငါးဆယ်လုံးလုံး အလွန်အကျွံ ဖြစ်ခဲ့မှုတွေကို ရှောင်ကြဉ်လိုကြောင်း ဦးရဲထွဋ်က Conference မှာပြောခဲ့တယ်လို့ မဇ္ဈိမသတင်းမှာ ရေးထားပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားတွေအရ နှစ်ငါးဆယ်လုံး အလွန်အကျွံ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ရှောင်ကြဉ်သွားမယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
ဖြေ – လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နှစ် ၅၀ အတွေ့အကြုံ၊ နှစ် ၅၀ အတွေ့အကြုံအရ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
မေး – ဘာ့ကြောင့်လို့ ဆရာထင်သလဲ။
ဖြေ – ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဦးရဲထွဋ်က ဘယ်သူလဲ။ စစ်ဗိုလ်က လာတဲ့လူ၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက ခိုင်းလို့ဆိုရင် ခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်မှာပဲ။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက ဘယ်သူလဲ။ ခိုင်းရင် ခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်မှာပဲ။ သူယုံတာ လုပ်လို့ မရဘူး။ သူယုံကြည်ရာ ပြောလို့ မရဘူး။ ဒီသဘာဝတရားကြီးက ပျောက်မသွားပါဘူး။ အခု လက်ရှိအတိုင်းလည်း ရှိနေတာပဲ။ ရှိနေတဲ့အတွက် ဒီအစိုးရ ဒီပုံစံအောက်မှာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
မေး – အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေဟာ မီဒီယာသမားတွေအတွက် အန္တရာယ်အရှိဆုံး ဥပဒေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ အိုင်တီနဲ့ ကင်းနိုင်တဲ့သူလည်း မရှိပါဘူး။ ဒီလို ဥပဒေကို မဖျက်ပဲ မီဒီယာ ဥပဒေပါ ထပ်လုပ်လာတော့ ပိုပြီးကြပ်ဖို့ဆိုတဲ့ အမြင်တွေ ရှိပါတယ်။ အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေအပေါ်မှာ ဆရာ ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ – ဆရာလုပ်ခဲ့ဖူးတော့ ဆရာ့တပည့်တွေက ကမ္ဘာအနှံ့ ရှိတယ်။ ရှိနေတော့ တပည့်တွေနဲ့ ဆရာနဲ့က အီးမေးလ်နဲ့ စကားပြောကြတာ ရှိတယ်။ အီးမေးလ် ပို့ကြတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန်၊ သူတို့ ဖတ်စေချင်တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွေ့ရင် အဲဒီဆောင်းပါးကို အီးမေးလ်က ပို့ပေးလိုက်တယ်။ သူတို့ကလည်း သူတို့ဖတ်စေချင်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးတွေ ဆရာဖတ်ဖို့ဆို ပြီး ပို့ပေးတယ်။ ဒါတွေကိုပဲ အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေနဲ့ အရေးယူလို့ ရတယ်။ လက်ရှိ တည်ဆဲ ဥပဒေအရ၊ ရှေ့မှာလည်း ဒါတွေနဲ့ အရေးယူ ခံခဲ့ရသူတွေ ရှိတယ်။ အဲတာကြောင့် ဒီဥပဒေ မှန်သမျှကို ဆရာက ဆန့်ကျင်တယ်။ ဥပဒေဆိုတာ ဘယ်ဥပဒေမှကို မကောင်းဘူး။ ကောင်းတဲ့ ဥပဒေဆိုတာ ရှိကို မရှိဘူး။ ပြည်သူလူထုကို တိုင်းသူ ပြည်သားကို ချုပ်ကိုင်ဖို့ပဲ။ သို့သော်လည်း မရှိမဖြစ်တဲ့အတွက် မရှိမဖြစ်တာတွေကိုတော့ ထားရမယ်။ ဒါဟာ ထားရမယ်။
မေး – ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Conference နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာများဖြည့်စွက် ပြောချင်ပါသေးလဲ ဆရာ။
ဖြေ – ဒီပေါ်မှာတော့ အသေးစိတ်တွေတော့ မသိရဘူးပေါ့။ ဒီအစည်းအဝေးလည်း မတက်ရဘူး။ ဘာတွေ ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကိုလည်း အသေးစိတ် မကြားရဘူး၊ မသိရဘူး။ အသေးစိတ်တွေတော့ မပြောချင်ဘူး။ သို့သော် ယေဘူယျ ခြုံပြောရ မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ Conference မှာ ပြည်ပကနေလာပြီး စာတမ်းဖတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ တွေ့ရတာ လည်းရှိပါတယ်။ ခြုံပြီးတော့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ခေါင်းစဉ်က Media Development in Myanmar၊ စာတမ်းဖတ်သွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း Media Development in Myanmar ဆိုတဲ့ အကြောင်းပဲ ဖတ်သွားကြတာပဲ။ အဲဒီတော့ ဒီမီဒီယာ ဥပဒေဆိုတဲ့ဟာက ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက နောက်ဖေးပေါက်က ဆွဲသွင်းလာတဲ့ဟာပဲ။ ပြောရလို့ရှိရင်တော့ ၀က်ခေါင်းချိတ်ပြီး ခွေးသား ရောင်းတဲ့ ပုံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါဝက်ခေါင်းမှန်း၊ ခွေးသားမှန်း သိတဲ့အတွက် ဒီခွေးသားကို
http://myanmargazette.net/106206/ မှာ.. ရေးထားခဲ့တာ..
ကျုပ်ရဲ့ Profile မှာလည်း.. ယူအက်စ်အခြေခံဥပဒေကို တင်ထားခဲ့တာ..။
မီဒီယာကို ထိမ်းချုပ်တဲ့ ဥပဒေဟူသမျှ.. အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းကြ…။
First Amendment – Religion and Expression – Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government foraredress of grievances.
အမှန်တော့.. ယူအက်စ်မှလည်း မီဒီယာဥပဒေ(လို့ခေါ်လို့ရမယ့် ဥပဒေ) ရှိပါတယ်..။
လွတ်လပ်စွာရေးသားပြောဆိုကိုးကွယ်ခွင့်တွေကို ..တားမြစ်အနှောက်အယှက်ပေးမဲ့.. ဥပဒေတွေ.. မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့..ဥပဒေပဲ..
မြန်မာပြည်မှာ.လည်း.. လွတ်လပ်ခြင်းကို မြတ်နိုးရင်… မီဒီယာဥပဒေ..ရှိရန်/ပြုရန်မလိုပါကြောင်း..
First Amendment to the United States Constitution တဲ့..
ကျွန်မတို့ ဂေဇက် က ဘာ အခွင့်အရေးကိုမှ မျှော်ကိုးပြီးတော့ လုပ်တာမဟုတ် ကြောင်း၊
ပြည်သူလူထု ရဲ့ တိုးတက်မှု အတွက် ပြည်သူလူထုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ လုပ်နေကြောင်း၊
အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေ ကို လုံးဝ ကန့်ကွက်ပတ်ကြောင်း၊
အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်စေ တယ်လို့ ပြောရအောင် သူတို့က ကြည်ညိုစရာကောင်းမကောင်း ကိုယ့်ပုံကို မှန်ထဲပြန်ကြည့်ကျစေဖို့ တိုက်တွန်းကြောင်း။
ဘယ်လို အော်ပြောကြမလဲ။ ;-)
သိဝူး …သများ ဘာမှမသိဝူး..
သများနဲ့ချိုင်ဘူး … သများသိတာ ..
မစီးရတဲ့ မီးရထား ဂဲနဲ့ ထုသူတွေ့ရင် သမ မယ်
သူကြီး – စောဒီး
ရွာသား အချင်းချင်း ကြားမှာလဲ မီဒီယာလိုလို့။ ;-)
ဂီဂီက.. အိုင်ဘီအမ်အတုကြီးဆိုလားး တခါး၇ပေါက် တင်ထားတယ်ဆိုလား.. တဲ့..
ကျုပ်တို့များ.. ယူအက်စ်မှာ ရွာသူားအချင်းချင်းရော.. မြန်မာတွေကြားထဲရော.. ဆက်သွယ်ရလွယ်အောင်.. ကြားခံမီဒီယာလုပ်နေတာ.. ပြိုင်ဖက်မရှိ.. ပုံနှိပ်သတင်းစာထုတ်နေတာ..။ ၂၀၀၆ကတည်းက..
ကျုပ်တို့တော့.. ဖိတ်လည်းမဖိတ်ပဲ.. ဘယ်သူတွေနဲ့ ဘာလုပ်သွားသလည်းမသိ..
၀န်ကြီးပြောသွားတဲ့ လွတ်လပ်မှု နဲ့တာဝန်ယူမှု၊ လွတ်လပ်မှုနဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားမှာ ဒီမိုကရေစီအားပြိုင်မှုရဲ့ အသွင်လက္ခဏာ ချိန်ခွင်ရှာကို မျှတစေတဲ့ အချက်နဲ့ ချိန်ထိုးယူလို့မရပါဘူး။ သမိုင်းကိုသမိုင်းဆရာတွေက ရုပ်လုံးဖေါ်ပါတယ်။ ဘက်မလိုက်ဖူးလို့ဘဲဘယ်လိုဘဲပြောပြော ဘက်လိုက်မှု ဒိဌရှိပါတယ်။ အစိုရရဲ့ အလုပ်က လူထုအတွက်လိုအပ်ချက်ကို အတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ executive power ရှိသူပါ။ လွှတ်တော်က လုပ်နိုင်အောင်လမ်းခင်းပေးတဲ့ legislature ပါ။ အစိုးရရော၊ လွှတ်တော်ကဘက်လိုက်မှုရှိပါတယ်။ မီဒီယာရဲ့ အားကို လမ်းတည့်မတ်ပေးရမှာက မီဒီယာတွေရဲ့တာဝန်တွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လမ်းတည့်မတ်နိုင်ခွင့်ရအောင် လုပ်ပေးဘို့က လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရရဲ့တာဝန်ပါ။
ပြည်ပမီဒီယာ၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ ဆရာဦးစိန်ဝင်းပြောသလို သူများလခစား အထောက်အပံ့ ယူနေရလို့ သခင်မျက်နှာထောက်နေရတာ အမှန်ပါ။ သို့သော်ပေါ့လေ…ဘဝရပ်တည်ရေး ဖြစ်နေပြီကိုး..။ အဲဒီဆရာများ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၂၀လောက်က ကိုယ်ကျိုးစွန့်ရပ်တည်ခဲ့တာ မှန်ပေမယ့် အခုလို သက်လတ်ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ့်ရှေ့ရေး ပါလာရပြီ။ မချမ်းသာခင်သာ ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ခံနိုင်ကြတာပါ (များသောအားဖြင့်) ချမ်းသာပြီးသွားရင် ပြန်အဆင်းရဲခံနိုင်ဖို့ ခက်တယ်။ ဒီလိုပဲ ပညာမတတ်ခင်သာ စွန့်ရဲတယ်၊ ပညာတတ်လာရင် ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ ချင့်ချိန်ကြ တွက်ဆကုန်ဂျတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ အတိုက်အခံကို ခြောက်မရရင် အစိုးရက ချော့ရတယ်။ အခုလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ လက်ရှိ ပြည်ပမီဒီယာမှာ နေရာရထားသူများ သူတို့ခုံကို လွယ်လွယ်နဲ့ မစွန့်ရက်နိုင်ပါဘူး။ ဝေဖန်သူ အတော်များများ ဒီသဘောပဲ ရှိကြပါလိမ့်မယ်။ လုပ်လို့ဖြစ်ဖို့ သေချာရင်တော့ တပိုင်းပေါ့လေ၊ အခုဟာက လုပ်ရင် ကိုယ်ပဲပြုတ်မှာ သေချာနေတော့ ရေလိုက်ငါးလိုက် နေဂျတာ သူတို့အဖို့ လက်တွေ့အကျဆုံး ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ ကျနော်တော့ ဒီလိုပဲ ခံစားနားလည်မိတယ်..။
နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း အကြောင်း ဂဂနန သိချင်ပါတယ်
article ဘယ်နှခုလောက်ရှိသလဲ.. အဲဒိ article တွေမှာပြောထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေက ဘာတွေလဲ စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ..
ဟို အရီးခင်လတ်ရေးထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီဖတ်စာ.. လိုမျိုး
လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း အကြောင်း ကျနော်တို့လို လူပြိန်းတွေ အလွယ်ဖတ်ပြီး သိရှိနားလည်နိုင်အောင် ပြောပြပေးပါအုံး..
စာအုပ်တွေဘာတွေ ရှိပြီးသားဆိုလည်း လင့်ခ်လေးဖြစ်ဖြစ်ပေးပါအုံး နော်
ကျေးကျေး ပါ ဂီ
ဘာသာပြန်ပေးမည့် ဘော်လင်တီယာ လဲ
မြန်မာလူထုအတွက်.. လုပ်ပေးခဲ့တာတွေလည်း မနည်းမှမနည်းတာပဲ..။ မြန်မာလူထုဆီကတော့ တပြားမှတောင်းတာ/ရတာလည်းမဟုတ်..။
ဒါပေမဲ့.. မီဒီယာကိုချုပ်ကိုင်မဲ့ ဘယ်ဥပဒေမှမရှိသင့်တာကိုတော့..အဲဒီသွားတက်သူတွေ.. ပြောသင့်တယ်လို့ထင်မိတယ်..။
ကျုပ်အနေနဲ့ကတော့.. လူထုဦးစိန်ဝင်းပြောတာ အပြည့် ထောက်ခံပါတယ်.။
ပိုဖြစ်နိုင်ရင်.. ယူအက်စ်အတိုင်း.. မီဒီယာကိုထိန်းချုပ်မဲ့..ဥပဒေတွေလုံးဝ(လုံးဝ)မပြုပါဘူးဆိုတဲ့.. လွတ်လပ်ခြင်းကိုအာမခံတဲ့..ဥပဒေမျိုးကိုတောင်.. အခြေခံဥပဒေထဲ အမဲမန့်နဲ့.. ထည့်ပေးလိုက်စေချင်တာပါ..။
မြန်မာပြည်လက်ရှိအစိုးရဟာ.. NLD လွှတ်တော်ထဲဝင်သွားရင်.. လွှတ်တော်တွင်းနဲ့.. (အပြင်)လူထု(မီဒီယာ) ချိပ်ဆက်ပြီး ဟန်ချက်ညီသွားမှာကို.. စိုးရိမ်ဟန်ရှိတယ်..။
ဒါကို အုပ်မိအောင် သိသိသာသာလုပ်ယူနေတယ်လို့ ထင်မိတယ်..။
မနေ့ ည က ပြောဖို့ မေ့ သွားလို့။
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကို US နဲ့ EU က လေ့လာလိုသူ များ ကို ဖိတ် လိုက်ပြီ။
ဝင်လာကြမှာဘဲ။ နိုင်ငံခြား မီဒီယာ ဆိုတာ မဟုတ်တာ ကို ဖွဖို့ ကို အခွင့်ချောင်း နေရတာ။
အဲဒီ ထဲက ကို ပြောင်လိမ်ဖို့ ကြိုးစား နေတာ၊ မဲခိုးဖို့ ကြိုစဉ်းစား နေကြ သူများကတော့ တမင်ကို သတ္တိပြောင်မြောက်လွန်းလို့လား၊ အသိ ဥာဏ်ကို တုံးအ လွန်းလို့လား၊ ပညာ ကို မရှိတာလား။ အပြင်ကို နဲနဲ လေး ကဲ ကြည့်ဖို့ ကောင်းပြီ။
မဟုတ် ရင်တော့ ဇာတ်သိမ်း လှမှာ မဟုတ်ဘူး ထင်ရဲ့။
အင်း .. ကျမလည်း ဆရာကြီး ပြောတာကို အပြည့်အ၀ကို ထောက်ခံတယ်။ အဲ့ဒီပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ဆိုတာကြီးကိုပါ ဖျက်သိမ်းသင့်တယ်။ ဆရာကြီး ပြောသလို သူ့နယ်ပယ်နဲ့ သူ ကျွမ်းကျင်သူကို နေရာမပေးပဲ နားမလည်တဲ့ အသိဥာဏ်မရှိတဲ့ သူတွေ အုပ်ချုပ်ခြယ်လှယ်ခဲ့လို့ တိုင်းပြည်လည်း အ၀ီဇိဆင်းနေပြီ ။ ပညာရေးလောကလည်း ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်ဖြစ်နေပြီ ။
နေရာတိုင်းကို သူနေရာနဲ့သူ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့သူတွေကို ပြန်နေရာပေးဖို့ကောင်းနေပြီ။ သူတို့သာတိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်ပြီး တကယ်အစစ်အမှန်ကောင်းစေချင်တယ် ဆိုရင်ပေါ့။ နှစ် ၅၀ တောင်ရှိပြီလေ ။ တချက်လောက်တော့ ငဲ့ကြည့်ပါအုန်းလို့။
ဒါနဲ့ သူကြီး မန္တလေးမှာ အမေရိကန်စင်တာ မရှိဘူးထင်တာပဲ ။ BC နဲ့ မှားသွားလို့ ။ ရန်ကုန်က လူကို လှမ်းမေးထားတယ် ။ ရှိရင် မေးလ်ပို့ပေးမယ်။ အရင်အမေရိကန် သံရုံးနေရာမှာ စာကြည့်တိုက်ဖြစ်နေလို့ ကျမတော့ ဒီနှစ်ထဲ လာဖွင့်ထားတယ်မှတ်တာပဲ ။ မနက်ဖြန်ဆို သေချာသိပြီ။
ရန်ကုန်အမေရိကန်စင်တာကတော့ မန္တလေးဂေဇက်ကို… လက်ခံလိုက်ပြီ..
Hopefully, I can read MG ( real news paper ) at Yangon.
but only 3???
How much cost for sending Mandalay Gazette News paper to Yangon?
I am thinking to raiseafund for it.
စာပေလွတ်လပ်ခွင့် ဟောသည့်ဗေဒင် စိစစ်ရေးဖြုတ်
။ ။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုအတွင်း စာပေ လွတ်လပ်ခွင့် အလားအလာမရှိကြောင်း
ဟောကြားချက် ပါရှိသည့် ဆရာစံဇာဏီဘို၏ ဗေဒင် အမေးအဖြေ ကဏ္ဍကို ပြည်တွင်းထုတ် The Express Times ဂျာနယ်တွင် ထည့်သွင်း ဖေါ်ပြရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း စာပေစိစစ်ရေးမှ ခွင့်မပြုဟု ဂျာနယ် အယ်ဒီတာက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
တနင်္လာနေ့ထုတ် The Express Times ဂျာနယ်တွင် သက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် မြန်မာ့
နိုင်ငံရေး အခြေအနေနှင့် စာပေလွတ်လပ်ခွင့်တို့ကို ဗေဒင်ဆရာ စံဇာဏီဘို အား ဂျာနယ်မှ မေးမြန်းရာတွင် “စာပေ လွတ်လပ်ခွင့် လုံးဝမမြင်ဘူး၊ တစုံတရာ အတိုင်းအတာထိ မမြင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပုဂ္ဂလိက နေ့စဉ် သတင်းစာ
ဖြစ်ပေါ်လာဖို့တော့ ဇွန် (၆ လ)မှာ မြင်တယ်” ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဆရာစံဇာဏီဘို၏ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်သည့် အဆိုပါဖြေကြားချက်ကြောင့် ဂျာနယ်အတွင်း ထိုမေးမြန်းခြင်းကို တားမြစ်ခြင်းဟု ယူဆကြောင်း The Express Times အယ်ဒီတာ ကိုကျော်ဇေယျာထွန်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“(ဗေဒင်ဟောချက်အရ)နိုင်ငံရေးမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်မယ်။ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ကလည်း ရမှာ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ သတင်စာကလည်း နေ့စဉ်သတင်းစာ ၃ စောင်လောက်ပဲ ထုတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့။ ကျနော်ထင်ပါတယ် အဲဒါတွေကြောင့်
ဖြုတ်ပစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ကိုကျော်ဇေယျာထွန်း က ပြောသည်။
မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ထုတ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကြေညာချက်ပါ “မဲစာရင်းများတွင် မှားယွင်းမှု၊ မပြည်စုံမှုများ မှာ အလွန်များပြားနေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်” ဟူသည့် ကောက်နုတ်ချက်ကို သတင်းရေးသားရာတွင် ထည့်သွင်း
ဖေါ်ပြခွင့်မရဟု ကိုကျော်ဇေယျာထွန်းက ပြောသည်။
ထို့အပြင် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ နေအိမ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့သည့် “မီဒီယာ လွတ်လပ်မှုကို ကန့်သတ်တယ်ဆိုတာဟာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ တိုးတက်မှုကို ကန့်သတ်တာနဲ့တူတူပဲ” ဟူသည့် စကားရပ်ကို ကိုးကားကာ တနင်္လာနေ့ထုတ် ဂျာနယ်တွင် ထည့်သွင်းဖေါ်ပြရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း စိစစ်ရေးက ဖြုတ်ပစ်ခဲ့သည်ဟု လည်း ကိုကျော်ဇေယျာထွန်းက ပြောသည်။
စာပေစိစစ်ရေးမှ ထိုသို့ ဖြတ်တောက်မှုများ ပြုလုပ်နေချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်စွာပင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ UNESCO တို့ ပူးတွဲကာ မီဒီယာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို မဇ္ဈိမ အပါအဝင်
ပြည်တွင်းပြည်ပမှ မီဒီယာသမားများ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မတ်လ ၁၉-၂ဝ ရက်နေ့များတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ မြန်မာ့မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက “အနာဂတ်တွင် မြန်မာ့မီဒီယာ
လောကသည် ပိုမိုလွတ်လပ် ပွင့်လင်းလာတော့မည် ဖြစ်ပါကြောင်း” ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဝန်ကြီးက ဆက်လက်၍ “ပုံနှိပ်မီဒီယာဥပဒေသည် စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဟန့်တားရန်၊ တားဆီးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးဆွဲနေခြင်းမဟုတ်ပါကြောင်း၊ စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်များကို လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အကျိုးစီးပွား ကို မထိခိုက်စေဘဲ မှန်မှန်ကန်ကန် ကျင့်သုံးနိုင်ရန်နှင့် မြန်မာ့မီဒီယာလောက ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း” ဟု ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
တဘက်တွင်လည်း အစိုးရဌာနအချို့၌ ငွေကြေး အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်နေမှုများ ရှိနေသည်ဟု သတင်းရေးသား
ဖေါ်ပြခဲ့သည့် The Voice ဂျာနယ်ကိုလည်း အင်္ဂါနေ့တွင် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနမှ တရားစွဲဆိုထားသည်။
ဗေဒင်တွက်ချက်မှုအရ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ်အတွင်း “စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရဖို့ ဘယ်လိုမှ မရှိနိုင်သေးပါဘူး။ စတုတ္ထုမဏ္ဍိုင်ဆိုတာ အလကားပြောတာ။ ပထမ မဏ္ဍိုင်၊ ဒုတိယ မဏ္ဍိုင်၊ တတိယ မဏ္ဍိုင်တွေကိုပဲ နိုင်အောင် လုပ်ပါဦးဗျာ။ စတုတ္ထုမဏ္ဍိုင်ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာကြီးပဲ။ That is impossible, very impossible” ဟု စံဇာဏီဘို က မဇ္ဈိမကို ပြောဆိုသွားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ ပြန်ကြားရေး ဌာနလို ကက်ဘိနက်အဆင့် ဌာနကြီး ကတော့ ဆက်လက်ရှင်သန်နေအုံးမယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်။ သတင်းလောက၊ မီဒီယာလောကနဲ့ ယဉ်ပါးခြင်းမရှိသေးတဲ့ လက်ရှိအစိုးရရဲ့အနေအထားကိုတော့ နားလည်ကြဘို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အပြန်အလှန်သွားသတင်းအပေးအယူစနစ် မထွန်းကားသေးသမျှကာလပါတ်လုံး သတင်းစိစစ်မှုကကြီးစိုးနေပါလိမ့်အုံးမယ်။
အဲ – တခုတော့ရှိပါတယ်။ ပြင်ပမှာရှိတဲ့ အထူးသဖြင့် သတင်းစာကဏ္ဍ နဲ့ (နောင်လမ်းဖွင့်လာခဲ့လို့) တီဗွီကဏ္ဍ တို့ရှိလာပြီးရင် တော့ ပုဂ္ဂလိက မီဒီယာ ကဏ္ဍ ကြီးစိုးပြီလို့အမှန်ပြောနိုင်ပါမယ်။ အဲ့ဒီကနေ သတင်းစာ နဲ့ တီဗွီကို အစိုးရထိပ်ပိုင်းအရာရှိများက မိမိတို့ရုံးခန်း ကနေ အရေးတယူ မပြတ်ကြည့်လာကြတဲ့ တနေ့၊ အဲ့ဒီနေ့ဟာ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ဒို့နိုင်ငံမှာ အခြေတည်ပြီ လို့လက်ခမောင်းခတ်နိုင်တဲ့နေ့ ပေါ့…..။
အခု ပို့စ်နဲ့တော့ ဆိုင်ပါဘူး ..
ကျနော် သိချင်တာလေး တစ်ခုရှိလို့ ..
အဲဒါ သူကြီးကို မေးခွင့်ပြုပါ …
Points ရဲ့ အောက်က Rank နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးချင်တာပါ …
ကျနော် တွေ့မိသလောက် Rank မှာ Newbie/ Bronze/ Silver/ Gold/ Platinum ဆိုပြီး ရှိပါတယ် ..
ပို့စ် စတင်တာနဲ့ Newbie ဖြစ်တယ် ..
နောက်တစ်ခု Bronze ကတော့ ပို့စ်ပေါင်း ၈၀၁ ခု ရှိမှ ဖြစ်တာလို့ တွေ့ရပါတယ် …
ခု ကျနော်တို့ ဆိုက်မှာဆို ပို့စ် ဘယ်လောက်ရှိရင် Bronze , Silver, Gold, Platinum ဖြစ်တာလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ ခင်ဗျာ …
ကျေးဇူးပြု၍ ဖြစ်နိုင်ရင် ဖြေပေးစေချင်ပါတယ် သူကြီးခင်ဗျာ …
Titanium 100000 kyat
ကျနော်က ပို့စ်နဲ့ ခွဲတာမှတ်နေတာ ..
ခု ပိုက်ပိုက်နဲ့ ခွဲတာကိုးဗျ ..
ဒါနဲ့ မနောတို့လို ပိုက်ပိုက် တစ်သိန်း ပြည့်ပြီးသား လူတွေကတော့ Newbie က ပြန်စပေါ့နော် ..
ကြယ်ကကောဘယ်လိုအရေးပါတာလဲ။ ပွိုင့်ကကောဘာအတွက်အရေးကြီးသလို ရွာသားတွေ
တာပဲနေမှာ ….. ဟိဟီးစတာနော် ဥကိုင် အဲလေ ဦးခိုင် ကြယ်နဲ့ပွိုက့်ကိစ္စကတော့
*အဲဒီတော့ ဒီမီဒီယာ ဥပဒေဆိုတဲ့ဟာက ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက နောက်ဖေးပေါက်က ဆွဲသွင်းလာတဲ့ဟာပဲ။
ပြောရလို့ရှိရင်တော့ ၀က်ခေါင်းချိတ်ပြီး ခွေးသား ရောင်းတဲ့ ပုံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါဝက်ခေါင်းမှန်း၊ ခွေးသားမှန်း သိတဲ့အတွက် ဒီခွေးသားကို လုံးဝ မ၀ယ်နိုင်ဘူး။*
ဒီလိုပြောလိုက်တာကို တော်တော်ကြိုက်သွားတယ် မိုက်တယ် !!